Ndị mmadụ: Ejila ọgwụ irighiri nje ụmụ anụmanụ maka COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Ndị mmadụ: Ejila ọgwụ irighiri nje ụmụ anụmanụ maka COVID-19
Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Safety • Tourism • Akụkọ dị iche iche
Ọgwụ anụmanụ abụghị maka mmadụ
Health Canada arịọla ụmụ amaala ya arịrịọ ngwa ngwa ka ha ghara iji ọgwụ ọgwụ anụmanụ a maara dị ka Ivermectin gwọọ COVID-19 ma ọ bụ nwaa igbochi igbochi coronavirus.
Ivermectin bụ onye na -egbochi antiparasitic n'ụdị mbadamba, mado, ọgwụ ọnụ, ọgwụ injectable, premix ọgwụ, ma ọ bụ okwu.
Health Canada nyere ụmụ amaala ya nkwupụta na -ekwu na ọ bụrụ na azụrụ ọgwụ a maka ebumnuche a, tụfuo ya ozugbo.
Ekwesịrị ịkpọtụrụ ọkachamara ahụike ma ọ bụrụ na ejirila ngwaahịa a yana enwere nsogbu ahụike.
Ụmụ mmadụ na -a drugsụ ọgwụ anụmanụ ma ọ bụ ụzọ ọzọ abụghị ihe ọhụrụ ma a bịa n'ihe gbasara ahụike. Onye isi ndị otu ndị otu ahụike India ga -adọ ụmụ amaala India aka na ntị megide omume ikpuchi onwe ha nsị ehi na mmamịrị ngwakọta dị ka ọgwụgwọ maka coronavirus.
Health Canada natara gbasara akụkọ gbasara iji ivermectin ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ iji gbochie ma ọ bụ gwọọ COVID-19. Ndị Canada ekwesịghị iri ngwaahịa ahụike ezubere maka anụmanụ n'ihi nnukwu ihe egwu ahụike nwere ike ibute ha.
Na nke a, Health Canada na -adụ ndị Canada ọdụ ka ha ghara iji ma ọgwụgwọ anụmanụ ma ọ bụ ụdị ọgwụ mmadụ nke Ivermectin iji gbochie ma ọ bụ gwọọ COVID-19. Enweghị ihe akaebe na -egosi na ivermectin n'ụdị abụọ ahụ adịghị mma ma ọ bụ dị irè mgbe ejiri ya maka ebumnuche ndị ahụ. E nyere ikike ivermectin nke mmadụ ka ọre ahịa na Canada naanị maka ịgwọ ọrịa ikpuru na -efe efe na ndị mmadụ.
Ụdị anụmanụ nke ivermectin, ọkachasị na oke ọgwụ, nwere ike dị ize ndụ nye mmadụ ma nwee ike bute nnukwu nsogbu ahụike dịka ọgbụgbọ, afọ ọsịsa, ọbara mgbali elu, mmeghachi ahụ nfụkasị, dizziness, ọdịdọ, coma, na ọbụna ọnwụ. Ngwaahịa Ivermectin maka ụmụ anụmanụ nwere oke mgbadosi ike karịa ngwaahịa ivermectin maka ndị mmadụ. Ngalaba ahụ maara ọtụtụ akụkọ gbasara ndị ọrịa nọ na US bụ ndị chọrọ nkwado ahụike wee nọrọ n'ụlọ ọgwụ mgbe ha jisịrị ivermectin ezubere maka ịnyịnya.
Health Canada na-enyocha nlebara anya ọgwụgwọ niile nwere ike maka COVID-19, gụnyere ọgwụgwọ a na-amụ na nnwale ụlọ ọgwụ mba ụwa. Ruo taa, Health Canada enwetaghị ntinye ọgwụ ọ bụla ma ọ bụ ngwa nnwale ụlọ ọgwụ maka ivermectin maka mgbochi ma ọ bụ ọgwụgwọ COVID-19.
Maka ọgwụ ndị nwere ike inye aka n'ịgwọ COVID-19, Health Canada na-agba ndị na-emepụta ọgwụ ike ka ha mee nnwale ụlọ ọgwụ. Nke a ga -enye obodo ahụike ohere ịnakọta ozi maka ịdị irè ọgwụgwọ ahụ yana ihe egwu ndị metụtara ya.
Ọ bụrụ na onye nrụpụta ewepụta nrube isi na Health Canada metụtara ojiji ivermectin iji gbochie ma ọ bụ gwọọ COVID-19, Health Canada ga-eme nyocha sayensị nke ihe akaebe iji chọpụta ogo, nchekwa na ịdị irè ọgwụ ahụ.
Health Canada ga -aga n'ihu na -enyocha ọnọdụ ahụ wee mee ihe kwesịrị ekwesị na oge kwesịrị ka ozi ọhụrụ dị, gụnyere ozi ọ bụla gbasara mgbasa ozi na -akwadoghị ma ọ bụ ire nke ivermectin. Health Canada ga -agwakwa ndị ọrụ ahụike na ndị na -azụ ahịa ozi nchekwa ọ bụla.
Health Canada adọla ndị Canada aka na ntị maka ngwaahịa na-ekwu ebubo ụgha na-eduhie eduhie ịgwọ ma ọ bụ gwọọ COVID-19. Maka ozi gbasara ọgwụ mgbochi ọrịa na ọgwụgwọ ikike Canada, gaa na Canada.ca.
Ivermectin, ọgwụ ọgwụ edepụtara, ka enyere ikike ire ere na Canada maka ịgwọ ọrịa ikpuru parasitic n'ime mmadụ, ọkachasị eriri afọ hardyloidiasis na onchocerciasis, na ekwesịrị iji ya maka ebumnuche a, n'okpuru nlekọta nke ọkachamara ahụike. Enwere ụdị ọgwụgwọ anụmanụ a maka ịgwọ ọrịa nje na ụmụ anụmanụ. Ndị mmadụ ekwesịghị iji ụdị ọgwụgwọ anụmanụ a.
Ihe ndị ahịa kwesịrị ime
Ọ bụrụ na azụtara ivermectin maka mgbochi ma ọ bụ ọgwụgwọ COVID-19, kwụsị iji ya wee tụfuo ya. Soro ntuziaka ime obodo ma ọ bụ mpaghara gbasara otu esi atụfu kemịkal na ihe mkpofu ndị ọzọ dị ize ndụ, ma weghachi ngwaahịa ahụ ruo n'ókè ire ere maka mkpofu nke ọma.
Kpọtụrụ ọkachamara ahụike ma ọ bụrụ na ejirila ivermectin ma enwere nchegbu ahụike. Kpesa mmetụta ọ bụla na ngwaahịa a ozugbo na Health Canada. Nyefee mkpesa na Health Canada ma ọ bụrụ na amaara ozi ọ bụla gbasara mgbasa ozi na -akwadoghị ma ọ bụ ire nke ivermectin ma ọ bụ ngwaahịa ahụike ọ bụla ọzọ site na iji akwụkwọ mkpesa dị n'ịntanetị.